Kasety lamba conductive
Lamba fiarovana taratra
Lamba mahazaka taratra-nikela
Volontany vita amin'ny taratra vita amin'ny volafotsy
Sarimihetsika miaro elektromagnetika PET
Sarimihetsika miaro elektromagnetika PI
Home > News > Vaovao momba ny indostria
Argentmesh conductive / miaro lamba volafotsy
PI sarimihetsika manify tin electromagnetic fitsabahana shielding film
Sarimihetsika miaro ny Emi ho an'ny fpc
Taratasy mpanaporofo taratra volafotsy volafotsy hanaovana harato moka fanoherana
Lamba taratra manohitra electromagnetic
Ny fitsipiky ny fibre volafotsy sy ny fampiharana azy amin'ny lamba
Ny fibre volafotsy dia afaka mitondra herinaratra haingana sy mahomby indrindra hisorohana ny fikororohana herinaratra amin'ny vatan'olombelona ary hiarovana ny vatan'olombelona amin'ny onja elektromagnetika.
Fampiharana fiarovana amin'ny EMI
Ny karazana ampinga EMI tsy tambo isaina dia samy manana fitaovana sy endrika maro karazana, fa amin'ny ankapobeny ny tanjona faratampony dia ny mametra ny saha elektromagnetika.
Lahatsoratra iray no mitondra anao hiady hevitra momba ny sarimihetsika miaro ny EMI
Ny fizaran-tany, ny fitaovana na ny rafitra rehetra dia tsy maintsy noforonina araka ny tokony izy mba hampihenana ny haavon'ny taratra arak'izay azo atao mba hahatratrarana ny fahatsapana afa-tsy amin'ireo haavon'ny electromagnetic avo lenta.
Ireo zavatra momba ny sarimihetsika taratra vy ireo
Ny sarimihetsika mandinika dia azo zaraina ho sokajy roa amin'ny ankapobeny, ny iray dia sarimihetsika taratra vy, ary ny iray hafa dia sary mihetsika diélectric feno. Ho fanampin'izany, misy sarimihetsika taratra diélectrika metaly izay manambatra azy roa, izay miasa hampitombo ny fitaratry ny tontolon'ny optika.
Ny fiparitahan'ny fibre volafotsy
Ny fibre volafotsy dia vokatra teknolojia avo lenta azo amin'ny alàlan'ny famatorana maharitra ny sosona volafotsy madio amin'ny tampon'ny fibre amin'ny alàlan'ny teknolojia manokana. Ity firafitra ity dia tsy mamela ny fibre volafotsy hihazona ireo fananana lamba tany am-boalohany, fa manome azy ireo koa ny fiasa majika an'ny volafotsy, ny vokatry ny majika volafotsy.
Inona avy ireo toetra sy vokatry ny lamba volafotsy volafotsy?
Ny fibre volafotsy dia vokatra teknolojia avo lenta azo amin'ny alàlan'ny famatorana maharitra ny sosona volafotsy madio amin'ny tampon'ny fibre amin'ny alàlan'ny teknolojia manokana. Ity rafitra ity dia tsy mamela ny fibre volafotsy hihazona ireo fananana lamba tany am-boalohany fotsiny, fa manome azy ireo koa ny fiasa majika an'ny volafotsy, ny vokatry ny majika volafotsy. teknolojia fanosotra volafotsy hamoronana sosona volafotsy volafotsy eo ambonin'ny vatan'ny fibre nylon.